ICambodia yabakhenkethi iVisa inokuba bubuqhetseba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » ICambodia yabakhenkethi iVisa inokuba bubuqhetseba
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseCambodia • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Februwari 7, 2019
Abatyeleli abacela i-visa ye-e-Cambodia bayalumkiswa ukuba bajonge iwebhusayithi ye-Cambodian Ministry of Foreign Affairs kunye ne-International Cooperation yaseCambodia. Kukho iiwebhusayithi ezingezizo ezonyuselweyo kwaye abakhenkethi baphulukana nemali ebhatelwe ubuqhetseba.
Ubuphathiswa balumkisa ukuba basebenzise iwebhusayithi yabo esemthethweni kuphela.
Iiwebhusayithi zeBogus zibandakanya i-cambodiaimmigration.org, eyabiza omnye umkhenkethi ongalindelanga i- $ 300-ebanga ubuxoki ukuba angakwazi ukufumana ii-visa zabakhenkethi eBukumkanini.
Elinye ilizwe lase-Bhritane lakhalaza kwiNdlu yoZakuzo yaseCambodia eLondon malunga neendleko ezigqithileyo ze-e-visa emva kokuba behlawuliswe i-90 yeedola yile webhusayithi, engaphezulu kakhulu kumaxabiso obulungiseleli. Ngokwenkonzo yomphathiswa isicelo se-e-visa kubakhenkethi kufuneka senziwe evisa.gov.kh. I-visa isebenza ngokusemthethweni iinyanga ezintathu kwaye ixabisa i $ 36.
Inkonzo ikhuphe ileta ngo-2017 isithi ifumene ii-webhusayithi ezili-17 ezithengisa ngobuqhetseba ii-e-visa kubakhenkethi ngexabiso elingaphezulu kwexabiso eliyinyani kwiwebhusayithi yenkonzo.
UTho Samnang, igosa kwiSebe lezoMthetho kunye ne-Consular kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphandle, uxelele amajelo endawo ukuba abo baxhasa ii-webhusayithi zobuqhetseba basebenzise inkqubo ephucukileyo ukuqhatha abasebenzisi.
Xa abafaki zicelo bechwetheza kumagama athi "Khambodiya" kunye "ne-e-visa", isikhangeli sibonisa iiwebhusayithi ezingezizo ezihlawulelwe ukuba ziboniswe kuqala kwiziphumo, utshilo. Xa umfaki-sicelo engazi ukuba ezi ndawo ziyimbumbulu, bayabhalisa, bazalise ifom emva koko bathumele intlawulo.
Umsebenzi wabasebenzi kwinkampani yezokhenketho yasePhnom Penh uthe akazazi iiwebhusayithi ezinikezela ngee-visa, esithi nguMphathiswa Wezangaphandle kuphela kunye newebhusayithi yakhe esemthethweni abanokuthi baphawule ngale meko.
BaseBrithani Khambodiya ihlawulwe khangela amagqabantshintshi epheleleyo intsebenziswano indleko indleko isebe i-ambassy ngokweqile olungeyonyani Ngaphandle Imicimbi yabangaphandle fu maneka buqhetseba intsebenziswano yamazwe ngamazwe ubukumkani zomthetho ileta London eendaba ilungu ntsimini imali iinyanga Mnikelo esemthethweni imali intlawulo Phnom Penh ixabiso Xabiso khuthazwa khululwe iziphumo thengisa-off ibonisa Kumasayithi imeko eziyinkimbinkimbi abaqeshwa isixokelelwano visa yabakhenkethi andazi ukusebenzisa ezisetyenzisiweyo ivisa visa website kwiwebhusayithi